PCF8574: Arduino အတွက် I2C I / O ချဲ့စက်အကြောင်း | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
သငျသညျsurelyကန်အမှန်ကြားဖူးတယ် IC PCF8574သီးခြားစီ ၀ ယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့မော်ဂျူးတစ်ခုပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သည် အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ သင့်ရဲ့ Arduino ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်သင်၏ပေါင်းစည်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များကိုတိုးချဲ့ပေးသည် I2C ဘတ်စ်ကား.
Arduino မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသားလို့သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် ဘက်ပေါင်းစုံ I2C ဘတ်စ်ကားဒါအမှန်ပဲ။ သို့သော် PCF8574 သည်သင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းဘတ်စ်ကားကိုတိုးချဲ့ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Arduino ထောက်ပံ့ပေးရုံထက်မကလိုအပ်သောထုတ်လုပ်သူအချို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
1 I2C ဘတ်စ်ကားကဘာလဲ။
2 PCF8574 ဆိုတာဘာလဲ။
3 Arduino နှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု
I2C ဆိုတဲ့နာမည်ကလာတယ် Inter- ပေါင်းစည်းတိုက်နယ် သို့မဟုတ်အချင်းချင်းပေါင်းစပ်ဆားကစ်။ ၎င်း၏ version 1.0 ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် Philips မှဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၀ တွင်ဒုတိယအချက် ၂.၁ ရောက်လာပြီးယနေ့တွင်မူပိုင်ခွင့်သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီးလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သောအခါ (၁၀၀ kbit / s နှုန်းဖြင့် ၃.၄ Mbit / s အမြင့်ဆုံးအထိ) စံဖြစ်လာသည်။
လက်ရှိတွင်၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့၏ IC ပရောဂျက်များတွင်မတူညီသော microcontroller များနှင့်အရံပစ္စည်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။
El I2C သည်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဖြစ်သည် လူသိများအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေး။ ၎င်းသည်ချန်နယ်နယ် ၂ ခုပါ ၀ င်သောထပ်တူဆက်သွယ်ရေး protocol ကိုအသုံးပြုသည် (တတိယရှိသော်လည်းရည်ညွှန်းသို့မဟုတ် GND နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်)၊ ၎င်းကို TWI (Wire Wire Interface) ဟုလည်းလူသိများသည်။
နာရီများအတွက်တစ်ခု (SCL) ။
ဒေတာအတွက်အခြား (SDA) ။
နှစ်ခုလုံးသည် open drain CMOS connection များဖြစ်ပြီး pull-up resistors များလိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် device တစ်ခုသည်0နှင့်အခြား 1 ကို transmit လုပ်လျှင်ပြproblemsနာများရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် line ကို 1 (high level) သို့သတ်မှတ်ထားပြီး devices များသည်0(low level) ထုတ်လွှင့်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သခင်နှင့်ကျွန် သူတို့က data signal ကို clock signal ကိုပထမဆုံးထုတ်လွှတ်တဲ့ cable နဲ့ track တစ်ခုတည်းကနေပေးပို့သည်။ I2C bus နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအရံပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီတွင်ထုတ်လွှင့်မှုကိုညွှန်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ထူးခြားသောလိပ်စာတစ်ခုရှိရမည်။ သို့သော်မာစတာသည်အမြဲတမ်းအတူတူ (multi-master) ဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ လွှဲပြောင်းမှုကိုအစပြုသူမှာအမြဲဖြစ်သည်။
ငါပြီးသားအပေါ်ဆောင်းပါး၌ရှင်းပြအဖြစ် Arduino I2C ငါအစောပိုင်းကကိုးကား, ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်ဤ I2C ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။ ပန်းကန်ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းကိုစနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်ရန်သင်သတိရဖို့လိုသည်။
Arduino UNO: SDA သည် A4 နှင့် SCK သည် A5 တွင်ဖြစ်သည်
Arduino Nano ပါ: ယခင်ကဲ့သို့တူညီသော။
Arduino Mega: SDA သည် pin 20 နှင့် SCK 21 တွင်ဖြစ်သည်။
I2C သည်သင်၏ပုံကြမ်းများအတွက်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည် Wire.h စာကြည့်တိုက် ဒီအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ
အစ ()ကြိုးမဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းဟာ master လားကျွန်ဖြစ်စေ၊
requestFrom (): ကျွန်ထံမှဒေတာကိုတောင်းဆိုရန်မာစတာအသုံးပြုသည်။
စတင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (): ကျွန်နှင့်အတူဂီယာစတင်ပါ။
ရေး ()- မာစတာထံမှတောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ကျွန်မှဒေတာကိုရေးပါသို့မဟုတ်သင်မာစတာ၏ဂီယာကိုတန်းစီနိုင်သည်
ရရှိနိုင် ()ဖတ်ရန် bytes အရေအတွက်ကိုပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။
ဖတ်ပါ (): ကျွန်တစ် ဦး ထံမှမာစတာသို့ပြောင်းပြန် byte မှအပြန်အလှန်ပေးပို့သော byte တစ်ခုကိုဖတ်ပါ။
onReceive (): ကျွန်ကမာစတာကနေဂီယာကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ function ကိုခေါ်ဆိုသည်။
တောင်းဆိုချက်အရ (): ကျွန်ကမာစတာကနေဒေတာတွေကိုတောင်းတဲ့အခါ function ကိုခေါ်တယ်။
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက Arduino ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သည် PDF သင်ခန်းစာ.
အဆိုပါ PCF8574 တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် I2C bus ဒစ်ဂျစ်တယ်သွင်းအားစုများနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုများ (I / O) ချဲ့ထွင်သည်။ ၎င်းကို ICs နှင့် modules များတွင်ရရှိနိုင်သောအပြင်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်သူများကထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသင်၏ Arduino board နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး motherboard ခွင့်ပြုသည်ထက်ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
El PCF8574 pinout ဒါဟာသာပါဝင်သည်ကတည်းကဒါဟာရိုးရှင်းပါသည် 8 ထင်းရူး quasi-directional (P0-P7 ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ချစ်ပ်များချိတ်ဆက်ထားသည့်နေရာ) နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်သင် moddu ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက် Arduino ဘုတ်နှင့် VCC နှင့် GND ချိတ်ဆက်ရမည့် SDA နှင့် SCL ရှိသည်။ ဆက်သွယ်မှုသို့မည်သည့်ကိရိယာများကိုရွေးချယ်ရန်လိပ်စာတံသင် A0, A1, A2 သုံးခုကိုမမေ့ပါနှင့် ...
ဒါဟာရှိပါတယ် အခြားအင်္ဂါရပ်များ မင်းသိသင့်တယ်
၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပွင့်လင်းယိုစီးမှုဖြစ်ခြင်းနိုင်ပါတယ် သွင်းအားစုများနှင့်ရလဒ်များအဖြစ်နှစ် ဦး စလုံးအသုံးပြုခဲ့သည်.
La အထွတ်အထိပ်လက်ရှိ ၎င်းသည် output တစ်ခုအနေနှင့်ပြုသည့်အခါ 25mA (လက်ရှိ PCF8574 ဆီသို့စီးဆင်းသောအခါနစ်မြှုပ်ပါ) နှင့် 300 µA (အရင်းအမြစ်, PCF8574 မှစီးဆင်းမှု) ဖြစ်သည်။
La တင်းမာမှု power supply သည် 2.5 နှင့် 6v ဖြစ်သည်။ stand-by စားသုံးမှုအလွန်နိမ့်သည်, 10 μAသာ။
ရလဒ်အားလုံး တံခါးကျင်ရှိသည်ပြင်ပလုပ်ဆောင်မှုများမလိုအပ်ဘဲပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ သငျသညျပြည်နယ်ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါမှသာပြုမူရန်ရှိသည်။
မင်းရနိုင်တယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းညွန်၊ ဆိုလိုသည်မှာထုတ်ကုန် ၈ ခုအထိနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန် ၈ ခုကို အသုံးပြု၍ ၄၄ ခုအထိတိုးချဲ့ရန် လိပ်စာများ (တံသင် A8, A8, A64) ဖြစ်လိမ့်မည်
000: 0x20 လိပ်စာ
001: 0x21 လိပ်စာ
010: 0x22 လိပ်စာ
011: 0x23 လိပ်စာ
100: 0x24 လိပ်စာ
101: 0x25 လိပ်စာ
110: 0x26 လိပ်စာ
111: 0x27 လိပ်စာ
ဝန်ခံ ကြားဖြတ် အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲ data တွေကို detect လုပ်ဖို့အထူးလိုင်းအားဖြင့် (INT) ။
Arduino နဲ့ဆက်သွယ်မှုကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ Vcc ကို Arduino ဘုတ်၏ 5v pin နဲ့ GND of Arduino နဲ့ချိတ်ဆက်ရုံပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, PCF8574 SDA နှင့် SCL module တစ်ခု၏တံသင်ဖြစ်နိုင်သည် တံသင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ 14 (A5 SCL) နှင့် 15 (A4 SDA) ။ ၎င်းစတင်အလုပ်လုပ်မှသာသင်ဆက်သွယ်ချင်သောကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန် Px ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထိုအခါကသာပျောက်ဆုံးနေမည်ဖြစ်သည် ဥပမာပုံကြမ်းတစ်ခုဖြင့်စတင်ပါ Arduino IDE ၌တည်၏။ သငျသညျကဲ့သို့သောအပိုဆောင်းစာကြည့်တိုက်ကိုမသုံးဘဲထိုသို့ပြုနိုင်သည် ...
ဒါမှမဟုတ်လည်း စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးပါထိုကဲ့သို့သောသင်တတ်နိုင်သမျှ PCF8574 အဖြစ် ဤနေရာတွင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ ဤစာကြည့်တိုက်နှင့်အတူပါလာသည့်နမူနာကိုယ်တိုင်မှအလားတူကုဒ်ကိုသုံးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ » PCF8574: Arduino အတွက် I2C I / O Expander အကြောင်း